Otu ụlọ ọrụ | Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
Oriakụ Dai Shumei:Onye nnochite anya iwu, onye isi oche, onye isi injinia, EMBA Master degree na Mahadum Tsinghua, Bachelor degree na Mahadum Zhejiang. Onye isi nke China Woman Entrepreneur Association, ndị nnọchi anya NPC. Ọkachamara si na mpaghara Hebei Science Bureau na-arụ ọrụ sayensị rụpụtara ọkachamara ụlọ akụ. Inwe 11 ikike patent na 6 n'ógbè sayensị rụzuru. Onye mbụ mepụtara 6 ikike patent nyere maka acetic acid na-eme teknụzụ ethanol. Enwetara 20 mba, mpaghara.
James Nwoke:Onye isi mba US nke na-eduga mmanụ ọkụ na-akpata ndu, akara ugo mmụta site na Mahadum Cincinnati, dọkịta na-esite na US Risk Manage Research Lab of National Environmental Protection Bureau. Companylọ ọrụ anyị ọkà mmụta sayensị na izugbe nkà ịrụ engineer. Onye mmeri nke 2008 “Science Achievement” Award si US Environment Protection Bureau. General engineer na-elekọta ọrụ nyocha ụlọ ọrụ nke eriri ethanol nzọpụta mmepụta ngwaọrụ ntọala na $ 66 nde US ngụkọta ulo oru mbo na injinịa imewe & nkà ịrụ mmepe nke 90,000 ton eriri ethanol kwa afọ mmepụta na ihe karịrị $ 200 nde. Ahụmahụ na ihe ịga nke ọma na-eduga R & D na-agbasawanye ala gụnyere mmepe ọganihu nke azụmaahịa, imepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nrụpụta injinia, mwepụta ngwaọrụ na arụmọrụ ụlọ ọrụ.
Oriakụ Li Qiuyuan:Onye ode akwukwo maka onye isi oche, Director nke R&D, Master degree nke Biochemical na Mahadum Zhejiang, injinia dị elu. Tupu iwere technician, manager nke Tangshan Pharmaceutical osisi, osote mmepụta manager nke nkwonkwo ịmalite techbiology biology engineering ltd.
Maazị Yang Chunhui:osote GM, onye njikwa njikwa, bachelọ ogo kemịkal sitere na Mahadum Tianjin, injinia dị elu. Tupu iburu onye omenkà nke ọgwụ mgbochi ọgwụ Tangshan, na-ahụ maka ọrụ aka maka ọgwụ.
Maazị Dai Shuzhong:Onye isi oche, were were onye njikwa ahịa nke Hebei solvent ltd. Onye isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ Wang Tangshan Meiyuan Wine. Onye njikwa ahịa nke Tangshan mkpụrụ obi ọkụ ọkụ ltd.
Oriakụ Yang Xiaoqing:GM Assistant, Master nke ego itinye ego na Mahadum Exeter, MBA na Mahadum OKC. Tupu ewere CEO, agadi nchọpụta nke Gold Mind Investment Consultancy ltd.
Maazị Wang Tianshuang:General Engineer, bachelor degree, agadi engineer. Tupu iwere ọkachamara, onye osote ụlọ ọrụ njikwa nke Hebei Fengrun Fatịlaịza Plant, Factory manager nke Lida Coal Plant, oru manager nke Hebei Xuyang Chemical Group, General engineer nke Hebei mgbaze ltd.
Maazị Wu Chaoyong: Doctor ogo si China Science Academy, director nke R & D center, ọhụrụ nlereanya nke Hebei sayensị enterprise
Oriakụ Hu Caijing:okokporo nke ezi chemical isi si Zhengzhou Light Industry College, agadi engineer. Inwe ahụmahụ 20 afọ nke ịzụta na ahịa.
Ndị Ọzụzụ Ndị Ọrụ: Zhongrong Enterprise Culture and Discussion
Dum mkpara ọzụzụ
Nyocha ndị ọrụ niile, chọrọ ihe karịrị 90 maka aha ọrụ niile
2019 Teknụzụ Zhongrong 32km ikgba ụkwụ
2019 Zhongrong Technology Winter Sports Nzute